Lozam-piarakodia : Nandindona an-dRavaonasolo Rasoanatoandro ny fahafatesany - L'Hebdo de Madagascar
#3 • Actualites • Onjam-piainana
Mivarotra vera antsinjarany etsy amin’ny Petite Vitesse, no asam-piveloman-dRavaonasolo Rasoanatoandro, renim-pianakaviana, monina etsy Andranomahery. Efa an-taonany maro no maty ny vadiny ary mipetra-drery izy rehefa lasa nanambady, Nirinasoa Hélène, zafikeliny voalohany izay notaizany
Loza tsy nampoizina
Antso avy amin’ny mpiara-monina an-dRavaonasolo Rasoanatoandro no nahenon’i Nirinasoa Hélène, voalohany ny loza. « Tongava aty Ivandry fa tratran’ny lozam-piarakodia ny renibenao. Tonga dia fantatro fa maty izy satria nolazain’ilay olona fa tsy azo kitihina. Tsy hitako izay hosangoritana sy hatao. Naleoko nandeha an-tongotra fa ela vao ho tonga noho ny fitohanan’ny fiarakodia. Tsy fantatro intsony ny fotoana laniko teny an-dàlana. Mihazakazaka dia mijanona rehefa sempotra. Manginy fotsiny ny fitaintainana hijery ny loza », hoy Nirinasoa Hélène, mitantara ny fiatrehany ny loza. Izy no fianakaviana tonga voalohany teo an-toerana.
Tsy navelan’ny mpitandro filaminana nokitihana ny nofo mangatsiakan-dRavaonasolo Rasoanatoandro izay nisy nandrakotra lamba. « Nifokofoko nitomany teo amoron-dàlana sisa no nataoko. Rehefa nobataina tao anaty fiara hoentina eny amin’ny hopitaly vao nanamafy fa maty tokoa ny renibeko. Nanampy trotraka ny nataon’ilay ramatoa tompon’ny taxibe. Tena manao tsinontsinona ny samy malagasy. F’angaha misy vola raofim-potsiny, hono no terena handoa ny lany rehetra izy », hoy hatrany i Nirinasoa, maneho ny alahelony amin’ny fahoriana mbola miampy ny faniratsirana nataon’ny tompon’ny fiara.
Niampita ny arabe amin’ny toerana fiampitan’ny mpandeha an-tongotra, Ravaonasolo Rasoanatoandro no voafaokan’ny taxibe 150, mampitohy an’Anosibe sy Antanandrano, ny alarobia 23 oktobra 2019 tokony tamin’ny 6 ora sy sasany hariva. Maty tsy tra-drano ity renim-pianakaviana taorian’ny loza. Nirinasoa Hélène no tonga voalohany teny an-toerana taorian’ny antso an-tariby nataon’ny mpiara-monina etsy Andranomahery. Taorian’ny loza, nitsoaka nandositra ny mpamily noho ny fatahorana ny fitsaram-bahoaka. Nampalahelo ny fianakaviana ny tsy fandraisana andraikitry ny tompon’ny fiara nanao ny loza.
Renim-pianakaviana tsy tia mipetrapetraka, Ravaonasolo Rasoanatoandro, fony fahavelony. Niezaka nandresy lahatra azy ny zanany ny hampiatoany io asa fivelomana ataony io. « Mandoa latsakemboka ny zanany sy ny zafikeliny efa manana fidiram-bola homena azy. Tsy mety nandray izany izy fa ny handeha hivarotra ihany. Omeo ny reniny, hono, ny vola omenareo satria mbola velona ny reniny », hoy Nirinasoa Hélène, mitantara ny fiarahan’izy mianaka niara-nitoetra.
Vao herintaona monja, Nirinasoa Hélène, zafikely voalohany no nanomboka notaizan-dRavaonasolo Rasoanatoandro hatramin’ny faha-21 taonany nandehanany nanambady. Mifankahazo am-po tsara izy mianaka ary mifankahalala toetra. « Tsy mikapoka matetika izy fa mananatra tsara ny fomba fiainana eny na rehefa any an-tokantrano aza. Azo lazaina fa tsy masiaka izy », hoy hatrany Nirina, mahatsiaro ny fiarahan’izy mianaka an-taonany maro.
Mipetraka etsy Antohomadinika akaikin’ny toby fiantsonan’ny fiara mankany Ambatondrazaka, Nirinasoa Hélène. Tonga nitsidika azy, Ravaonasolo Rasoanatoandro, ny marain’ny Talata 22 oktobra 2019 mialohan’ny hisehoan’ny loza ny ampitso. Tsy fanaon-dRavaonasolo Rasoanatoandro ny mamangy ny zanany na zafikely raha tsy andro fety na faran’ny herinandro izay nahasanganehana ny zafikely. « Mitady hazo hanoloany ny varavarambe sy varavarankely, hono, izy. Nefa tsy misy simba na lanin’ny biby ny varavarambe na ny varavarankely. Amin’ny fomba ahoana moa no hilolohaviny hazo miainga eny Antohomadinika ka hatraty Ivandry ? », hoy Nirinasoa Hélène, mamerina ny fihetsiky ny renibeny tamin’io andro nihaonan’izy mianaka farany io.
Tsy nifantoka loatra tamin’ny resaka nifanaovan’izy mianaka, Nirinasoa Hélène. Hany ka zary malok’endrika sy nalahelo ary nitsiky tsy ravo, Ravaonasolo Rasoanatoandro. « Hafatra ny ahy reitsy dia ampitaiko amin-dry. Tsy te hitelin-kafatra aho ka sao hananako tsiny. Tsy misy azoko izay teny noteneniny sady tsy nifantoka tamin’ny resaka aho fa ny fampirimana trano ihany no notohizako. Tsy tadidiko akory ilay hafatra nolazainy. Rehefa hitany aho fa tsy mivaky loha amin’izay resany dia nangata-dàlana ny handeha izy », hoy hatrany Nirina, nanenina ny tsy firarahiana ny resaka farany nataon’ny renibeny izay fotoana farany nihaonana sy nifampiresahan’izy mianaka.
Nitsoaka nandositra ny mpamily vao nitranga ny loza. Tahotry ny fitsaram-bahoaka raha ny filazan’ny mpamily mpanampy. Nitabataba hatrany ny tompon’ny fiara fa tsy afaka handray an-tànana iray manontolo ny vola lany amin’ny fikarakarana ny razana. Nitaky hatrany ny taratasy nandoavam-bola izy. « Tsy hiverina intsony ny havanay fa kosa tokony mba handray andraikitra. Izy tompon’ny fiara no tokony hiantoka rehefa tsy hita ny mpamily », hoy Nirinasoa Hélène, maneho ny alahelony amin’ny fanivaivana ny fatin’ny renibeny.
Ny fianakavian-dRavaonasolo Rasoanatoandro, no niantoka ny saran-dàlana niala tao amin’ny hopitaly ka hatreny an-tranony hatramin’ny vidin’ny fôrmôla. Tsy nisy resaka na fifampidinihana ny saram-pandevenana. « Saika tsy ho sarotiny izahay mianakavy fa saingy izy no manery anay hiditra lalindalina kokoa. Sady manao vava tsy tsaroana no tsy mivaky loha aminay » hoy hatrany Nirinasoa.
Namoahan’ny fitsarana didy fampisamborana ny mpamily rehefa tsy nitolo-batana teny anivon’ny mpitandro ny filaminana.
Nalevina ny sabotsy 26 oktobra 2019 teny amin’ny fasan-drazany eny Ambohipanja, ny nofo mangatsiakan-dRavaonasolo Rasoanatoandro.
Idées cadeaux haut de gamme : Pourquoi pas du « vita malagasy »?
Entrepreunariat :: Fiona Tsiranana au chevet des petites entreprises